UMongameli uGeorge Washington - Iinkcukacha ezifutshane
UMongameli wokuqala we-United States
UGeorge Washington nguye kuphela umongameli okhethwe ngokubanjelwa ukuba abe ngumongameli. Wayeyiqhawe ngexesha leNguqulelo yaseMerika waza wenziwa ngumongameli weNqunquthela yoMgaqo- siseko . Wabeka ezininzi iimbali ngexesha lakhe kwi-ofisi eqhubekayo nanamhla. Wanikezela iprogram yendlela umongameli okufanele ayenze ngayo kwaye yintoni inxaxheba ayimelwe ukuyithatha.
Nantsi uluhlu olukhawulezayo lwezinto ezizimeleyo kwiGeorge Washington.
Unokufunda ngokubanzi malunga nale ndoda enkulu:
I George geography
Izinto ezi-10 eziphezulu zokumazi ngoGeorge Washington
NgoFebruwari 22, 1732
Disemba 14, 1799
Ngo-Apreli 30, 1789-Matshi 3, 1797
UMarta Dandridge Custis
"Ubaba Welizwe Lethu"
"Ndihamba emhlabathini ongekho." Akukho nto ihamba ngayo kwindlela endiyifumana ngayo engafanele ilandelwe ngaphambili. "
Ukongezwa kweeNgxelo zeWashington
Ingaba uGeorge Washington waphonsa umthi we-cherry waza watshela uyise inyaniso?
Impendulo: Njengokuba sazi, hayi. Enyanisweni, i-Washington's biographer, uMason Weems, wabhala incwadi ethi "Ubomi baseWashington" kungekudala emva kokufa kwakhe apho adala le ngqungquthela njengendlela yokubonisa ukuthembeka kukaWashington.
Unyuliwe kwikota yokuqala kunye nevoti yokhetho lonyulo (1789)
Ubalo lwabantu bokuqala baseUnited States (1790)
ISithili saseColumbia sisungulwe (1791)
IBhili yamaLungelo agunyazisiweyo (1791)
Isibhengezo sokungathathi hlangothi (1793)
Uvukelo lweWhisky (1794)
I-Jay Treaty (1795)
ISivumelwano sikaPinckney (1796)
Idilesi yokuBala (1796)
Amazwe angena kwi-Union xa e-Ofisi:
I-George Washington Imithombo:
Ezi zixhobo ezongezelelweyo kwiGeorge Washington zingakunika ulwazi olungakumbi malunga nomongameli namaxesha akhe.
Thatha ngakumbi ukujongwa kumongameli wokuqala we-United States ngokusebenzisa le biography. Uza kufunda malunga nobuntwana bakhe, intsapho, umsebenzi wamandulo kunye nemikhosi, kunye neziganeko zolawulo lwakhe.
UGeorge Washington Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo
Nazi iimpendulo kwezinye zezinto ezibuzwa ngokubanzi malunga neGeorge Washington kuquka "Yayiphi isimo sengqondo ngokubhekiselele kubukhoboka ?," "Ngaba wayinqumle ngempela umthi we-cherry ?," kunye "Wathini ukuba akhethe uMongameli?"
Ingxoxo malunga neMfazwe yeNguqulelo njengenyaniso 'yokuguqulwa' ayiyi kusombululwa. Nangona kunjalo, ngaphandle kwalo mzabalazo waseMelika usenokuba yinxalenye yoBukumkani baseBrithani . Fumana malunga nabantu, indawo kunye neemeko ezifake uguqulelo.
Le ngxowa efundisa inika ulwazi olukhawulezayo kwi-Presidents, i-Vice-Presidents, imimiselo yabo yeofisi kunye namaqela abo ezopolitiko.
Eminye kwiMongameli waseMerika
Grey okanye Grey? Indlela yokutyhila umbala
Ndiyaxhamla xa ndibuhlungu Ngethuba lobugcisa be-Skateboarding - Yintoni endiyenzayo?
Ukufumana iSock Best for Day Race
Imbali ye-Television Censorship
I-Livrer - Ukukhupha
Imfazwe egameni likaThixo-iMfundiso yeTheth
I-NFL Point eyahlukeneyo yokuBheja
Bhala abalinganiswa baseTshayina usebenzisa i-Pinyin kunye neFonetic Input Method